Ikhaya Iibhulogi zeendaba Izifundo ze Causation Studies about Porn Porn
Ukupapashwa kwenkcazo yokunyanzelwa kokuziphatha ngokwesondo ngo-Juni 2018 yi-WHO yayisekwe kubungqina obunamandla. Nangona kunjalo, abanye abantu basala ukuba ukusetyenziswa kwamanyala kunokubangela ukwenzakala engqondweni nasemzimbeni. Kule bhulogi sijonga kwizifundo ze-causation ze-6 ezipapashiweyo ukuza kuthi ga ngoku ezibonisa ubukho njengabathathi-nxaxheba banqamle ukusetyenziswa gwenxa kwe-porn kunye nokuphilisa ukungasebenzi kakuhle ngokwesondo. Zonke zidibanisa ukusetyenziswa kwe-porn okanye iziyobisi kwi-porn dysfunctions kunye ne-arousal esezantsi.
1) Ngaba iinthombe zoononopasho ze-intanethi zibangelwa izidakamizwa zesondo? Ukuphononongwa ngeeNgxelo zeKliniki (2016)
Uhlaziyo olubanzi lweencwadi ezinxulumene neengxaki zesini zesondo ezibangelwa iicons. Ukubandakanya oogqirha be-Navy base-7 base-US, ukuhlaziywa kunika ulwazi olutshanje olubonisa ukunyuka okukhulu kweengxaki zesini zolutsha. Iphinde iphinde iphinde ihlolisise iiprogram eziphathelene nokuxhatshazwa kwezesondo kunye nesimo sezesondo nge-intanethi. Oogqirha bahlinzeka ngeengxelo ze-3 zecandelo lamadoda aphuhlisa i-porn-induced the dysfunctions. Amadoda amabini kwala madoda aphilisa izifo zabo zesondo ngokuphelisa ukusetyenziswa koonobumba. Indoda yesithathu ayizange iphuculwe kangangoko njengoko yayingakwazi ukuyeka ukusetyenziswa kwezilwanyana. Ngcaciso:
Iimpawu zendabuko ebezichaze iingxaki zesini zesini zibonakala zingenakulungele ukuba i-akhawunti ikhule ngokukhawuleza kwi-erectile dysfunction, i-delayed ejaculation, iyanciphisa ukwaneliseka ngokwesini, kwaye iyanciphisa i-libido ngexesha lokwabelana ngesondo phakathi kwamadoda phantsi kwe-40. Olu hlalutyo (i-1) lijonga idatha kwiindawo ezininzi, umzekelo, iikliniki, i-biological (utywala / urology), yengqondo (isimo sengqondo sesini), i-sociological; kwaye (2) iveza uluhlu lweengxelo zeklinikhi, zonke ngenjongo yokucebisa isicwangciso esithile esinokuthi senze uphando ngexesha elizayo le meko. Utshintsho kwinkqubo yokukhuthaza kwengqondo ihlolisiswa njenge-etiology ebonakalayo ejongene nokuxhatshazwa ngokwesondo.
Olu hlaziyo luqwalasela ubungqina bokuba iipropati ze-intanethi eziyingqayizivele (ubuntsingiselo obungenamkhawulo, ukukwazi ukukhula ngokulula ukuya kwizinto ezigqithiseleyo, ifomathi yevidiyo, njl.) Kunokuba lunamandla ngokwaneleyo ukuxhatshazwa ngokwesini kwimiba ye-intanethi ye-intanethi isebenzise ukuba ingatshintsheki -abalingani bezilwanyana, njengokuba isondo kunye nabalingani abafunayo abanakubhalisa njengento yokulindela kunye nokunyuka kokuvusa. Iingxelo zeklinikhi zibonisa ukuba ukuyeka ukusetyenziswa kwezithombe ezingamanyala nge-intanethi ngamanye amaxesha kunokwanela ukuguqula iziphumo ezimbi, kugxininisa imfuno yophando olubanzi usebenzisa iindlela eziphethe izifundo ezikhutshwayo.
I-Foundation Foundation wabhala ibali malunga nale sifundo xa kuphuma kuqala.
2) Iimpawu zokuhlambalaza kunye nokuxhatshazwa ngokwesini (2016)
Olu pho nonongo lwengqondo lwesiFrentshi olungumongameli wangoku European Federation of Sexology. Nangona i-abstract ishintshana ngokuphindaphindiweyo phakathi kwe-intanethi ye-intanethi nokusebenzisa i-masturbation, kucacile ukuba ngokubhekiselele zonyango iintsholongwane zesondo (i-erectile dysfunction kunye ne-anorgasmia). Eli phepha libhekiselele kumava akhe eekliniki kunye namadoda e-35 aphuhlise ukungasebenzi kwe-erectile kunye / okanye i-anorgasmia, kunye neendlela zakhe zokwelapha zokubanceda. Umlobi uthi ezininzi izigulane zakhe zasebenzisa i-pornography, kunye neentlobo ezininzi zokuba zizilwelwe kwi-pornography. Iingcamango ezingabonakaliyo kwi-intanethi njengesizathu esibalulekileyo seengxaki (gcinani engqondweni ukuba i-masturbation ayibangeli i-ED engapheliyo, kwaye ayinakunikwa i-ED). I-19 yamadoda e-35 ibone ukuphucula okuphawulekayo ekusebenzeni ngokwesondo. Amanye amadoda aye aphuma kwonyango okanye azama ukubuyela. Amacatshulwa:
intro: Ayinobungozi kwaye iyanceda nangendlela yakhe eqhelekileyo eyenziwa ngokubanzi, mukuhlaziywa kwindlela yayo eqhelekileyo kunye neyokuqala, ngokuqhelekileyo edibeneyo nanamhlanje kwi-addictional sex addiction, idla ngokugqithiseleyo ekuvavanyweni kwekliniki yokungasebenzi kakubi ngokwesondo kunokukwenza.
iziphumo: Iziphumo zokuqala zezi zi gulane, emva kokonyango "ukungafundi" imikhwa yabo yokuphulula amalungu esini kunye nokukhotyokiswa kwabo neziyobisi, kuyakhuthaza kwaye kuyathembisa. Ukuncitshiswa kweempawu kwafunyanwa kwizigulana ze-19 ngaphandle kwe-35. Izidakamizwa ziguqulwe kwaye ezi zi gulane zakwazi ukufumana umsebenzi owenelisayo wesondo.
Isiphelo: Ukutshatyalaliswa kwe-masturbation, edlalwa kunye nokuxhomekeka kwi-cyber-pornography, kuye kwabonakala kubamba indima kwi-etiology yeentlobo ezithile ze-erectile disys function or coital hungjaculation. Kubalulekile ukuchonga ngokuchanekileyo ubukho bale migaqo kunokuba kuqhutywe ukuxilongwa ngokupheliswa, ukwenzela ukubandakanya iindlela zokuqhelana nokukhubazeka ekulawuleni le mibabalazo.
3) Isenzo esingaqhelekanga sesenzo somzimba njengesisombululo se-etiological ekuxilongweni nasekunyangekeni koxinzelelo ngokwesondo kwi-young men (2014)
Enye yeephando ze-4 kwiphepha libika ngendoda eneengxaki zezesondo ezibangelwa iigonyamelo (i-libido ephantsi, i-fetus, anorgasmia). Ukungenelela ngokwesondo kufaka i-6-iveki yokuziyeka kwi-porn kunye nokuhlaziya umzimba. Emva kweenyanga ze-8 le ndoda yachaza umnqweno wesondo, isondo eliphumelelayo kunye ne-orgasm, kwaye iyanandipha "izenzo ezifanelekileyo zesondo. Le ngxelo yokuqala yokuhlaziywa kontanga yokubuyiselwa kwimizimba yokuxhatshazwa ngokwesondo. Amacatshulwa avela kweli phepha:
"Xa ebuzwa malunga nezenzo zokuziphatha, wachaza ukuba ngaphambili wayedlala ngokukhawuleza ngokukhawuleza ngoxa wayebukela iphonografi ukususela ebusheni. Imifanekiso engamanyala yayiqala ngokuyinhloko ye-zoophilia, kunye nokugqila, ukulawula, ukunyaniseka, kunye ne-masochism, kodwa ekugqibeleni waqhelana nalezi zinto kwaye wayedinga iziqendu ezingaphezulu zoonografi, kuquka ne-sexender transgender, ubundlobongela kunye nodlova obundlobongela. Wayethetha ukuthenga amafilimu angaphantsi kobugqwetha kwizenzo zesondo zobundlobongela nokudlwengula kwaye wabonakalisa ezo zigcawu kwiingcamango zakhe zokuziphatha ngokwesini kunye nabasetyhini. Wanciphisa kancane umnqweno wakhe kunye nokukwazi kwakhe ukucinga kunye nokunciphisa i-masturbation. "
Ngokubambisana kunye neeseshoni zeveki kunye ne-sexistrapist, isigulane salelwe ukuba sigweme nayiphi na into yokuchazwa ngokwesini, kuquka amavidiyo, amaphephandaba, iincwadi kunye ne-intanethi.
Emva kweenyanga ze-8, isigulane sichaza ukufumana i-orgasm ephumelelayo kunye nokunyuka. Wahlaziya ulwalamano lwakhe naloo mfazi, kwaye ngokuthe ngcembe baphumelela ekunandeleni izinto ezilungileyo zesondo.
4) Kunzima kangakanani ukuphatha ukunyanzelwa kokubambezeleka ngaphakathi kwendlela yokwabelana ngesini nengqumbo? Uthelekiso lwesifundo (2017)
Ingxelo yeebini "iingxaki ezidibeneyo" ezibonisa izizathu kunye nezokwelapha ukuxilwa kwe-ejaculation (anorgasmia). "Isigulana B" sasimele amantombazana amancinci aphathwe ngumgqirha. Kuyathakazelisa ukuba iphepha lichaza ukuba "ukusetyenziswa koononophelo lwe-Patient B" kwanyuka kwinto ebonakalayo kunzima "," njengokuba kunjalo njalo ". Eli phepha lithetha ukuba i-porn-delay related ejaculation ayiqhelekanga, kwaye iphakama. Umbhali ufuna ukuba uphando oluthe xaxa malunga nemiphumo yezocwangco zezenzo zesondo. Ukunyanzeliswa kwesifo sikaMonde B kupheliswe emva kwee-10 kwiiveki ezingekho zezocwangco. Amacatshulwa:
Amatyala anamacala athile athathwe kum msebenzi wam kwiNkonzo yeSizwe yezeMpilo kwisibhedlele saseYunivesithi saseCroydon, eLondon. Kwimeko yokugqibela (Umonde B), kubalulekile ukuba uqaphele ukuba le ntetho ibonisa inani lamadoda abesilisa abathunyelwe yiGP zabo kunye nokuxilongwa okufanayo. Umonde B ngumntu oneminyaka eyi-19 oye wabonisa ngenxa yokuba wayengenakukwazi ukuhamba nge-penetration. Xa wayengu 13, wayehlala efikelela kwiisayithi zoononografi ngethuba lokutshekisha kwi-intanethi okanye ngeengcingo abahlobo bakhe bamthumayo. Waqala ukuhlamba i-masturbating ubusuku bonke ngelixa efuna ifowuni yakhe umfanekiso ... Ukuba akazange ahlase i-masturbate wayengakwazi ukulala. Imifanekiso engamanyala ayisebenzisayo yayisanda, njengokuba kunjalo njalo (jonga i-Hudson-Allez, i-2010), kwizinto ezinzima (akukho nto engekho mthethweni) ...
Umonde B wayebonakaliswe kwizithombe zozesondo ngokusebenzisa iinthombe zoononografi ukusuka kwiminyaka ye-12 kunye noonografi ayisebenzisayo wayeye wahlabela ebukhosini kunye nolawulo lwe-15.
Savuma ukuba akayi kuphinda asebenzise iinthombe zoononophala ukuze ahlaziye. Oku kuthetha ukushiya ifowuni yakhe kwigumbi elithile ebusuku. Savuma ukuba uya kuhlambalaza ngendlela eyahlukileyo ....
Umonde B wayekwazi ukuphumeza i-orgasm ngokusebenzisa ukungena ngeseshoni yesihlanu; iiseshoni zenziwa ngehora lesibini kwiSibhedlele seYunivesithi yaseCroydon ukuze iseshoni yesihlanu ilingana namaxesha e-10 malunga nokubonisana. Wavuya yaye wayekhululekile gqitha. Kwiminyaka emithathu yokulandelelana kunye noMonde B, izinto zaqhubeka zihamba kakuhle.
Umonde B ayikho icala elizimeleyo kwiNational Health Service (NHS) kwaye ngokwenene abaselula abafumana ukunyanga kwengqondo ngokwesondo, ngaphandle kwamaqabane abo, bathetha ngokwabo kwimimandla yenguqu.
Le ngqaku ke isekela uphando oludlulileyo oluye lwadibanisa isitala sokugcoba ngesondo kunye nokungabonwayo koonografi kwisitayela sokugcoba. Le nqaku iphetha ngokuphakamisa ukuba impumelelo yabathinteli beengqondo zobundlobongela ekusebenzisaneni ne-DE ayinakudla ngokubhaliweyo kwincwadi yezemfundo, eye yavumela umbono we-DE njengengxaki eyinkathako yokuphatha isala kakhulu. Eli nqaku lifuna uphando malunga nokusetyenziswa koonografi kunye nemiphumo yalo ekukhwenzeni i-masturbation kunye ne-genitalisation.
5) Isimo se-Psychogenic Anejaculation: I-Case Study (2014)
Iinkcukacha zibonisa ityala le-porn-induced unjaculation. Amava kuphela e-zesini yomyeni ngaphambi kokuba umtshato ahlale ephinga i-pornography-apho wayekwazi khona ukuhlambalaza. Kwakhona wathi ukulala ngesondo kunokuvusa ngaphezu kokukhenkceka kwezononono. Icandelo eliyinhloko lenkcazelo kukuba "ukuqeqeshwa kwakhona" kunye neengqondo zengqondo zahluleka ukuphilisa ukunyuka kwakhe. Xa ezo zongenelelo zingaphumeleli, abaphengululi bacebise ukuba banqatshelwe ngokugqithiseleyo ukugcoba i-pornography. Ekugqibeleni oku kuvinjelwa kwintsebenzo yesini esiphumelelayo kunye nokunyuka komntu kunye nomlingane okokuqala ngqa ebomini bakhe. Ambalwa amacatshulwa:
A ngumntu oneminyaka engama-33 oneminyaka engama-30 ubudala esatshatileyo kunye noqhelwano oluqhelekileyo, oqeqeshiweyo kwimvelaphi yezoqoqosho nezentlalo. Akazange abe noqhagamshelwano ngaphambi kokulalana ngaphambi komtshato. Wayebukela iphonografi aze ahlaziye rhoqo. Ulwazi lwakhe malunga nesondo kunye nobulili belwanele. Ukulandela umtshato wakhe, uMnu A wachaza i-libido njengokwesiqhelo, kodwa kamva wanciphisa ubuncinci kwiinkcaso zakhe. Ngaphandle kokunyakaza kwe-30-45 imizuzu, wayengakaze akwazi ukuhlaziya okanye ukufeza i-orgasm ngexesha lokulala ngesondo nomfazi wakhe.
Yintoni engazange isebenze
Imishanguzo kaMnu A isingqinisiso; i-clomipramine kunye ne-bupropion zayeka, kwaye i-sertraline yayigcinwa kwisantya se-150 mg ngosuku. Iiseshoni zonyango kunye nale mbhangqwana babanjwe ngeveki kwiinyanga ezimbalwa zokuqala, emva koko bebekwa phakathi kweentsuku zintlanu nangemva kwenyanga. Iziphakamiso ezikhethekileyo kuquka ukugxila kwiintlungu zesini kunye nokugxila kumava esondo kunokusebenzisa ukunyusa ukuxininisa ukukhathazeka komsebenzi kunye nokubukela. Ekubeni iingxaki zithe gqolo nangona kungenelelo, unyango olunzulu lwezesondo lwaqwalaselwa.
Ekugqibeleni baqeshwe ngokupheleleyo ukukhwabanisa (oko kuthetha ukuba waqhubeka ehlambalaza ngoononophelo ngexesha elingentla apha angenelela ngoncedo):
Ukuvinjelwa nayiphi na uhlobo lwesenzo sezesondo kucetyiswa. Ukuqhutyelwa phambili kwindlela yokugxilwa kweengqondo (okokuqala kungezange-zesini kunye nolwasemva kokuzalwa kwesini) zaqaliswa. UMnu A wachaza ukungakwazi ukufumana isantya esifanayo sokuvuselela ngexesha lesini esithandwayo xa kuthelekiswa nento ayenayo ngexesha lokuhlambalaza. Emva kokuvalwa kwendlela yokugcoba i-masturbation, yaxela umnqweno owenyukayo wezesondo kunye nomlingane wakhe.
Emva kwexesha elingachazwanga xesha, ukuvinjelwa kwe-masturbation kwi-pornography kubangela impumelelo:
Okwangoku, uMnu A nomkakhe banquma ukuqhubela phambili ngeNkqubo yokuThuthukiswa koNcedo (i-ART) kwaye babe nemigudu emibili yokutshatyalaliswa kwe-intrauterine. Ngethuba leeseshoni zokufunda, uMnu A wahlulwa okokuqala ngqa, emva koko uye wakwazi ukunyusa ngokukhawuleza ngexesha elininzi lwabantu abasebenzelana ngesondo.
6) Iimfono zoonografi zenza u-Erectile Dysfunction Among Among Young Men (2019)
Abstract: Eli phepha lihlolisisa le nto Iifoto zoonografi zenze i-erectile dysfunction (PIED), okubhekisela kwiingxaki zobundlobongela bezesondo kumadoda ngenxa yokusetyenziswa kweetayilifiya ze-intanethi. Idatha yempi evela kubantu abahluphekayo kule meko iqokelelwe. Ukudibaniswa kwendlela yokuphila kwimbali yokuphila (kunye neengxoxo zemibuzo elandelwayo enxulumene ne-intanethi) kunye needayari ezijongene nazo kwi-intanethi ziqeshwe. Idatha iye yahlaziywa ngokusebenzisa uhlalutyo olusisiseko (ngokutsho kwe-McLuhan ye-theory media), ngokusekelwe ekuqulunqweni kokuhlalutya. Uphando olunzulu lubonisa ukuba kukho ukulungelelaniswa phakathi kokusetyenziswa koononografi nokusetyenziswa kwemisebenzi erectile ebonisa ukuba i-causation.
Ezi ziphumo zisekelwe kwiingxoxo ze-11 kunye needari ezimbini zevidiyo kunye neetayari zetekisi ezintathu. Amadoda aphakathi kweminyaka eyi-16 kunye ne-52; Bachaza ukuba isingeniso sokuqala kwezentlekiso (ngokuqhelekileyo ngexesha lokukhula) lilandelwa ukusetyenziswa kwansuku zonke kude kube yinto ekufikeleleke kuyo apho umxholo ogqithiseleyo (okubandakanya, umzekelo, izinto ezinobundlobongela) kufuneka ukuba uhlale uvuselela. Isigaba esibucayi sifikeleleka xa ukuvuswa kwesondo kuhlanganiswa ngokugqithiseleyo kunye nokukhawuleza ngokukhawuleza, ebonisa ukuziphatha okubi ngokobulili kunye nokungathandeki. Oku kubangela ukungakwazi ukugcina isakhiwo kunye nomlingani wezobomi, apho apho amadoda aqala khona "inkqubo yokuvuselela", ukushiya i-pornography. Oku kuye kwabanceda amanye amadoda ukuba abuye aphinde akwazi ukufezekisa kwaye agcine ukulungiswa.
Isingeniso kwisiqendu siphumo
Emva kokucubungula idatha, ndiqaphele iipatheni ezithile kunye nezihloko eziphindaphindiweyo, emva kokulandelana kwenkcazelo kuzo zonke i-interview. Zezi: intshayelelo. Omnye uqala ukubonakalisa imifanekiso engamanyala, ngokuqhelekileyo ngaphambi kobuntwaba. Ukwakha umkhwa. Omnye uqala ukutshatyalaliswa koonografi rhoqo. U kunyuka. Omnye uphendukela kwiindlela ezininzi "ezigqithiseleyo" zoononografi, iziqulatho-iziqulatho, ukwenzela ukufezekisa iimpembelelo ezifanayo ezaphunyezwe ngeendlela ezingaphantsi "ezigqithiseleyo" zoonografi. Ukufezekisa. Omnye uqaphela iingxaki zesifo soxhatshazo ezikholelwa ukuba kubangelwa ukusetshenziswa koonografi. Inkqubo ye "Re-boot". Omnye uzama ukulawula ukusetyenziswa koonografi okanye ukuwuphelisa ngokupheleleyo ukuze aphinde abuyele kwisondo. Idatha evela kwintluli-dliwano-ntetho ihanjiswa ngokusekelwe kwinqumle engentla.
Ukongezelela kwizifundo zokunyusa ezibalwe apha ngasentla, Eli phepha liqulethe amanqaku kunye namavidiyo ngeengcali ze-130 (urology profesors, urologists, psychiatrists, psychologists, sexologists, MDs) abavuma kwaye baphumelele ukuphatha i-porn-induced ED kunye ne-porn-induced loss of sexual desire.